Qubanaha » XOG: Sheekh Shariif Oo Malaayiin Dollar Ka Helay Dowlad Carbeed Iyo Ganacsato Tujaar Ah…
XOG: Sheekh Shariif Oo Malaayiin Dollar Ka Helay Dowlad Carbeed Iyo Ganacsato Tujaar Ah…
illo xog ogaal ah ayaa nala wadaagay in isbadal weyn uu ku yimid qorshahii dowlada imaaraadka ee Doorashada Soomaaliya waxaana dowlada imaaraadka xiligaan ay maalgalineysa musharaxiin cusub waxaana ka mid ah Sheekh Shariif.
Musharax Shariif Sheekh Axmed oo gaaray dalka imaaraadka carabka ayaa kulamo qarsoodi ah oo halkaasi ka dhacay kadib waxaa lasoo siiyay Lacag badan si Ololahiisa doorashada u xoojiyo iyadoo markii uu kusoo laabtay laga dareemay Magaalada Muqdisho.
Dowlada Imaaraadka oo horay ballanqaad ugu sameysay Sheekh Shariif, ayaa iminka ka dhabeysay ballanqaadkeeda waxaana la xaqiijiyay inay gudoonsiisay “Laba Boqol iyo Konton Milyan”oo dollarka Mareykanka ah.
Lacagtaani loogu deeqay Sheekh Shariif ayaa ujeedkeeda lagu sheegay in loo adeegsado Xildhibaanada BFS ee Madaxweynaha cusub dooran doona.
Sheekh Shariif ayaa dhaqaalaha ugu badan ka helay Dowladaha Imaaraadka, Turkiga iyo Qadar oo raja ka qabta in wadaadka uu mar kale hogaamiyo Siyaasada Somalia.
Shariifka ayaa sidoo kale dhaqaale ka helay qaar ka mid ah ganacsatada ugu taajirsan Abgaal ee dalalka Kenya iyo South Afrika ka shaqeysta.